Rakhine Terrorists attacked and killed the Muslims in Kyauktaw | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Muslim houses destroyed in Rakhine Myae Pone township during night curfew
On the 5th August 2012 at about afternoon, Rakhine Buddhist Terrorists started to attack and burn the Shufi Taung village, Apokewa village and Shwe Hlaing Village in Kyauktaw Township. And they cruelly assaulted and killed one resident from Pike Thae village with machetes.
Justafew days before the attack, Khwe (Aye) Maung’s party members came and ordered the Rakhine Buddhists to burn those Kalar (Muslim) villages and threatened to take action if they failed to do so. Myanmarmuslim.net is informed byaRakhine Muslim who got the message fromaRakhine-Bama friend.
Dr. Aye Maung, Chairman of RNDP Party which used to suppress and terrorized the Rohingya (aka) Rakhine Muslims is givenanickname, “Khwe (Aye) Maung” by the suppressed victim Rohingyas.
This burning of the Muslim villages yesterday had happened after Rakhine National Development Party’s Kyauktaw entourage.
Because of that arson attack, almost all the Muslim houses in Shufi Taung village, Apokewa village and Shwe Hlaing Village in Kyauktaw Township are destroyed. We got the reports that the Masjids in those villages were also destroyed by the Rakhine Buddhist Terrorists.
Locals reported that they could not give detailed list of damages and causality because the authorities strictly condone off the effected villages.
There were roughly about 150-200 houses in Shufi Taung village, 1000 houses in Apokewa village and 250-300 houses in Shwe Hlaing Village and almost all the houses were burnt down by the Rakhine Buddhists. There arealot of causalities in those burnt and damaged villages but it is difficult to get confirmation of the exact number of death and injured because of the authorities who arrived only after the terrorizing incident.
Rakhine Buddhist Terrorists with machetes chased two villagers from Pike Thae at 5.45 PM yesterday. One of them managed to escape but 30 year old U Elias son of Abdul Malik was cruelly killed.
This entry was posted on August 7, 2012 at 1:40 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “Rakhine Terrorists attacked and killed the Muslims in Kyauktaw”
August 7, 2012 at 1:50 pm | Reply
ကျောက်တော် မွတ်စလင်မ် များကို ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်များ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်
သြဂုတ်လ၊ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၂။http://www.myanmarmuslim.net/news.php?item.774.22
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ရှုဖိတောင်ကျေးရွာ၊ အပေါက်ဝကျေးရွာ၊ ရွှေလှိုင်ကျေးရွာတို့ကို ၅.၈.၂၀၁၂ နေ့ နေ့လယ်အချိန်မှစတင်ကာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်များက ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ပိုက်သည်ရပ်ကျေးရွာသားတစ်ဦးကို ဓားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ထစ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် မင်းမဲ့စရိုက် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
“မီးရှို့မခံရခင် ရှေ့ရက်က ခွေး(အေး)မောင်တို့ပါတီက လူတွေလာပြီး သူတို့လူတွေကို မင်းတို့ ဒီကုလားရွာ တွေ ကို မီးမရှို့ရင် မင်းတို့(တ)တွေကို အရေးယူမယ်လို့ ရခိုင်ဗမာတွေကို လာပြောသွား တယ်။ ဒီအကြောင်း ရခိုင်ဗမာတစ်ယောက်က ပြန်ပြောတာ”ဟု ရခိုင်မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးက myanmarmuslim.net သို့ ပြောကြား သည်။
ရိုဟင်ဂျာ (၀ါ) ရခိုင်မွတ်စလင်မ်တို့အား အဓမ္မဖိနှိပ်မှုများကို ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသည့် RNDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်အား ဖိနှိပ်ခံရသူ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာတို့မှ ခွေးမောင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည်။
ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မွတ်စလင်မ်ရွာများ မီးရှို့ခံရမှုသည် ရခိုင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ၏ ကျောက်တော် ခရီးစဉ်ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုများကြောင့် ကျောက်တော်ရှိ မွတ်စလင်ကျေးရွာများဖြစ်သည့် ရှုဖီတောင်၊ အပေါက်ဝ၊ ရွှေလှိုင်ကျေးရွာတို့တွင် မွတ်စလင်အိမ်ခြေများ အားလုံးနီးပါး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ကျေးရွာများရှိ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တို့၏ သာသနိက အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များလည်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်သူတို့၏ လက်ချက်ကြောင့် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖျက်ဆီးခံရသည့် မွတ်စလင်ကျေးရွာများ အတွင်းသို့ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့်ကို အာဏာပိုင်များက တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားသဖြင့် ပျက်ဆီး သေဆုံးသူများစာရင်းကို အတိအကျ မပြောနိုင်သေးကြောင်းဒေသခံများက ပြောသည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရှုဖီတောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၅၀ မှ ၂၀၀ ကြား၊ ရွှေလှိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၂၅၀-၃၀၀ ကြား၊ အပေါက်ဝကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိပြီး အိမ်ခြေအားလုံးနီးပါးကို ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ မီးလောင်တိုက်အသွင်းခံခဲ့ရသည့် မွတ်စလင်ကျေးရွာများအတွင်း သေဆုံးမှုများ အများအပြား ရှိခဲ့သော်လည်း အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုများအပြီးမှ ရောက်ရှိလာသည့် တာဝန်ရှိသူများကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ စာရင်း အတိအကျကို ယခုအချိန်အထိ အတည်ပြုနိုင်ရန် ခက်ခဲနေသည်။
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်အချို့သည် ယမန်နေ့ညနေ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်တွင် ပိုက်သည်ရပ် ကျေးရွာသားနှစ်ဦး ဓားဖြင့်လိုက်လံခုတ်သတ်ခဲ့ရာ တစ်ဦးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ဦးအိလိယစ် (အသက် ၃၀နှစ်၊ အဖ အဗ္ဗဒွလ်မာလစ်)မှာမူ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏လက်ချက်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
Ruwanga fara or ( Rohingya village) လည် အပါအဝင် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ ရပြီး မီးလောင်အိမ်မှ ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားသူ ကလေး လူကြီး အမျိုးသမီးကြီး/ငယ် အယောက် ၇၀ လောက် ဓါး၊သံချွန်၊လှံ စသည်တို့ဖြင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး ကလေးငယ်များကို နို့စို့  ကလေးငယ်များကို မိုးပေါ်မြှောက်ပစ်ပြီ ပြန်အကျမှာ ဓါးခံ၍ ပိုင်ဖြတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ထိုသို့သတ်ဖြတ်နေစဉ်း ရခိုင်လုံထိန်းများက ၎င်းအကြမ်းဖက်သမားဘက်က အကာအကွယ်ပေးထားသည်အတွက် သူတို့ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်လိုမရနိုင်ကြောင်း ၈ ရက်နေ့က ကျောက်တော်ကို ဖုန်းခေါ်တုန်းက အိမ်မီးရှို့ ခံရပြီး မိန်မနှင့် ၂ နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တို့ ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသူတစ်ဦးမှ ကိုယ်တိုင် နားထောင်ခွင့်ရလိုသိခဲ့ရပါသည်။ အဲဒီသတင်းကို နားထောင်နေတုန်း မျက်ရည်ကျသည်ထိ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ မင်းတို့အသက်ရှင် သေးတယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ထွက်သွားပါ မဟုတ်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်လက်ခံပါ ဟူ၍ ထိုအကြမ်းဖက်သမား ရခိုင်များက ဆိုနေကြောင်းလည်သိရသည်။